Al Shabaab oo laga saarey Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Sh.Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al Shabaab oo laga saarey Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Sh.Dhexe
14th May 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Aadan Yabaal (Mareeg)—Ciidamada milatariga Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo wada jira ayaa lagu soo waramayaa in saakay gudaha u galeen si buuxdana ula wareegeen Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabeelaha Dhaxe.
Dagaayahanada Al-Shabaab oo mudo snado badan gacanta ku hayay Degmada Aadan Yabaal ayaa la sheegay in ay halkaasi isaga baxeen shalay galinkii dambe kadib markii ay ka war heleen ciidamo badan oo katirsan AMISOM iyo kuwa Dowlada oo soo gaaray duleedka degmadaasi.
Saraakiil katirsan Ciidanka Dowlada ee qabsaday degmada Aadan Yabaal ayaa Warbaahinta u sheegay in si buuxda ula wareegeen degmadaasi ayna hada wadaan howgalo lagu xaqiijinayo amaanka degmadaasi.
Lama soo sheegin wax dagaal ah oo ku dhax maray degmada Aadan Yabaal Ciidamada Huwanta ah iyo kuwa Al-Shabaab, waxaana degmadaasi ay hada tahay mid faaruq ah oo dadkii degnaa intooda badan ay ka qaxeen.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, ayaa mudooyinkii dambe waxa ay howlaglo ka wadeen gobolka Shabeelaha Dhaxe, waxa ayna Ciidamada Al-Shabaab kala wareegeen degmooyin iyo Deegaano Al-Shabaaab gacanta ugu jiray mudo sanado badan ah.
Tiyeeglow oo ka xurowday Alshabaab iyo Ciidamada Dowlada oo ku guuleystay
Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay Buulo burte